ဆောင်းပါး , June 30, 2020
“အသိ သတိ များဖြင့် ရင်ဘောင်တန်းကြစေလိုခြင်း ယခုမိမိမှရေးသားတင်ပြမူသည် မည်သူ့ကိုမျှ ထိပါးစေလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ မည်သူ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ပုတ်ခတ် မူလည်းမဟုတ်ပါ၊ မိမိသည် နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများကို ရေးသားလာခဲ့ရာတွင် (၁၀) နှစ်နီးပါးခန့်ရှိပါပြီ၊ မိမိ၏ ဆောင်းပါးများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ပြီး...
ဆောင်းပါး , June 28, 2020
တိုင်းပြု ပြည်ပြု ဟူသော လေးမြတ်သည့် စိတ်ခွန်အားများနှင့် အမိနိုင်ငံတော် – – နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်ခွင့်… =========================== မိမိတို့နိုင်ငံ သည် လွပ်လပ်ရေးကြိုးပန်းးစဉ် ကာလ – ရပြီး ကာလ… တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်သည့်ကာလ...
ဆောင်းပါး , June 26, 2020
ဆရာ မျိုးမြတ်သူ ၏ ကမာရွတ်ပုံပြင်(၁၆) မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။ ================================= ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ ရင်ရင်နွယ်၊ ရူပဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ တင်လှိုင်၊ ဓါတုဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညိုတို့နဲ့...
ဆောင်းပါး , June 25, 2020
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုပြန်လည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထူထောင် တည်ဆောက်ရေး တမ်းချင်း ယခု (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် (၂၀၁၀ ) နှင့် အထူးသဖြစ် (၂၀၁၅) ၏ ဒုတိယလိူင်း သို့မဟုတ်...
ဆောင်းပါး , June 23, 2020
လိုအပ်ပါသော ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေပြဌာန်းမှုများနှင့် နိုင်ငံတော် ဆောင်းပါး၏ အစတွင် မိမိရေးသား တင်ပြခြင်မူကို ပထမဦးစွာ တင်ပြပါရစေ၊ ယခု fb ၌နေပြည်တော် တွင် နိုင်ငံရေးရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ၊ ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးများအား မြေပေးမည့် ကိစ္စများကိုရေးသားနေကြသူများမှာ ယဉ်ကျေးပြီး အချက်အလက်ဖြင့်ထောက်ပြကြသူများမှ အချို့သည်...
လူလား ? မူလား ? ကိုယ်စားပြု ခြင်းလား ?
ဆောင်းပါး , June 20, 2020
လူလား ? မူလား ? ကိုယ်စားပြု ခြင်းလား ? လူတိုင်းသည် တစ်စုံတစ်ရာသော အတိုင်းအတာအထိ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို၊ရေးသားနိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ ပြောခြင်ရာပြော. ဆိုခြင်ရာဆိုလို့ မဖြစ်ပေ၊ မိမိတစ်ဦးခြင်း၏ စောင့်ထိန်းကြရမည့် တာဝန်များ၊...
ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပုနဲ့ တူသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဆောင်းပါး , June 19, 2020
ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပုနဲ့ တူသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် _________________________ မွန်ဆရာတော် U Ravika ရေးသည် ဒီစာ မရေးခင် မိမိအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမာခံပရိသတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရင်ပြောလိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ရတက်မအေးဖွယ်များ တွေ့ရတိုင်း...
“”တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်”” (အညာသား)
ဆောင်းပါး , June 16, 2020
“”တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်”” အညာသား ယခုတလော Social Media ပေါ်တွင် မြို့မိ မြို့ဖ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း တင်ထားသော Post များကို မြင်ရတွေ့ရ ဖတ်ရှုနေရပါတယ်။ ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို...
ဆောင်းပါး , June 14, 2020
မိမိဒေသ၊ မိမိအဖွဲ့အစည်း ၊မိမိပြည်သူအကျိုးနှင့် မိမိတို့၏ထမ်းဆောင်ရမည့် ပြည်သူများအတွက် ဝန်ဆောင်နိုင်လိုမှု လိုအပ်ပါသောကြောင့် ထပ်မံ ဖော်ပြ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဒေသနှင့် ထိုဒေသအတွင်း အခြေချ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သောဒေသအတွင်းပြည်သူများ– မိမိနိုင်ငံသားပြည်သူ ပြည်သားများ၊ မိမိဒေသအပါအဝင်မိမိ၏နိုင်ငံတော် အတွက်ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ဆောင်မူများသည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏...
ဆောင်းပါး , June 12, 2020
တွေးဆမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်….. တွေးဆမူသည် လက်တွေ့ကျသည့် နိုင်ငံရေးမဟုတ်သလို အယူအဆ၊မူဝါဒလည်းမမည်ပါ။ မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုဘဲ ဖြစ်စေ….. တွေးဆ ခွင့်ရှိပါတယ်။ အစရှိပြီး အဆုံးသတ်မူလည်းရှိ နိုင်သလို….. မဆုံးနိုင်သည့် အရာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုသည်က တွေးဆ သူတစ်ဦးချင်းနဲ့သာ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တွေးဆမူသည်...